Xarakada alshabaab oo ka hadashay hoos u dhaca dolarka iyo labadii sarkaal ee shaleey lagu dily Muqdisho |
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ugu magacaaban Al-shabaab ayaa Markii ugu horeyay ka hadlay dhibaatada ay hadda qabaan Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwo ku dhaqan Caasimadda Somaliya ee Muqdisho.
Waxaana uu sheegay in ay la socdaan dhibaatada hadde heystay Shacabka Somaliyeed iyo saameynta ay ku yeesheen hoos u dhaca lacagta dolar-ka ah oo maalmihii ugu danbeeyay ka jirta Nuqdisho iyo nawaaxigeeda.
Al-shabaab ayaa hoos u dhacaan dolarka-ka waxaa ay ku eedeynayaan in ay ka danbeeyaan dowladda somaliya ,iyagoona sheegay in ay dowladda dooneyso in ay wax yeeleyaan Shacbnka masaakiinta ah ,sida ay Al-shabaab ka dhawaajiyeen.
Si kastaba aha ahaatee hadalkan Al shabaab ayaa waxaa uu imaanayaa xilli wali shacabka muqdisho ay tabayaan haahi ay u qabaan in la xakameeyo hoos u dhaca dolarka iyo sara u kaca qiimaha qutul-daruuriga ah.
Dhanka kale na waxaa uu soo hadal qaaday dilalkii shaley ka dhacay muqdhisho ee loo geystay labo sarkaal oo kala ahaa Mustafa Jiis iyo Ismacil Fuul-Fuul oo ka tirsanaa nabad sugida Somaliya.
Shabaab ayaa sheegatay inay ka danbeeyeen dilka loo gaystay labo kamid ah saraakiisha dowlada Soomaaliya kuwaas oo lagu dilay degmada Yaaqshiid.
“Mujaahidiintu in mudda ah ayay raadinayaan saraakiisha ladilay,runtii dhowr mar ayaan u sheegnay in ay cadawga safkiisa kasoo baxaan oo ay dhibaatada ka daayaan shacabka muslimiinta ah balse waa diideen gacanta mujaahidiinta ayayna maanta ku baxeen Allaah ayaa ku mahadsan”ayuu yiri Sheekh Cali.